Molo, ividiyo entsha ye-smart intercom evela kwiNest | Iindaba zeGajethi
Molo, i-intercom entsha yevidiyo ekwiNest
UJose Alfocea | | Ukuzenzekelayo ekhaya
Kwiveki ephelileyo, inkampani yetekhnoloji yeNest, egxile kwii-thermostats kunye nokujonga ikhaya elitsha, yathatha umtsi ngokubonisa inkqubo yokhuseleko yokuqala yabantu ababiziweyo Nest Safe.
Kodwa le nkqubo yokhuseleko, eyenziwe ngezixhobo ezintathu, ayifikanga yodwa, kodwa ikhatshwa zezinye iimveliso ezimbini ezintsha. Inkqubo ye- I-Nest Cam IQ yangaphandle, ikhamera yokujonga imeko yemozulu, kunye Mholo, I-intercom yevidiyo ekrelekrele esiza kuthetha ngayo ngokulandelayo.
Nest Molo, yintsimbi esiyifunayo ekhaya
Intsimbi entsha emnyango emnyango Mholo Indlwane ine Ikhamera ye-HD ngendawo ebanzi ye-160-degree yokujonga kunye ne-HDR ebonelela ngomgangatho obalaseleyo womfanekiso. Kodwa iza ne iindlela ezimbini zokumamela kunye nesithethi, ukuze isandi sihambe kakuhle.
Ikwadibanisa Umsesane okhokelwayo onokukhanyisa ngayo umnyango wendlu kwaye ngaloo ndlela ubone ngcono ukuba ngubani okuyo.
I-intercom yevidiyo entsha Mholo uyakwazi qaphela ukuba umntu usemnyangoekhaya, naxa ungayikhalanga intsimbi. Inxibelelana nge IBluetooth kunye neWi-Fi usebenzisa usetyenziso lwezixhobo eziphathwayo kwaye uthumele isaziso kumnini onomfanekiso wokuba ngubani osemnyango. Ukusukela ngoko, umsebenzisi angagcina unxibelelwano notyelelo, naphina, kwaye ngokutyibilikayo. Kwaye udlale iaudiyo ecwangcisiweyo kutyelelo lwakho.
Kwakhona, ukuba ukhetha umrhumo wenyanga kwiNest Aware, ye- $ 10 ngenyanga Mholo uya kuba nakho uku Chonga amalungu osapho lwakho, kunye ne-24/7 yokurekhodwa kwevidiyo kunye neminye imisebenzi eyongezelelweyo enxulumene nezinye iimveliso zegama.
Okwangoku ixabiso eliza kubakho kwibhokisi yentsimbi entsha alaziwa Mholo ukusuka kwiNest kodwa into esiyaziyo kukuba iya kukhutshwa eYurophu nase-United States kwikota yokuqala ye-2018.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Ikhaya » Ukuzenzekelayo ekhaya » Molo, i-intercom entsha yevidiyo ekwiNest